Gazetiboky Sangany Ao Iran, Naato Taorian’ny Niresahany Momba Ny Tokantrano Maso Ivelan’ny Fanambadiana · Global Voices teny Malagasy
Gazetiboky Sangany Ao Iran, Naato Taorian'ny Niresahany Momba Ny Tokantrano Maso Ivelan'ny Fanambadiana
Voadika ny 05 Mey 2015 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Deutsch, Español, 日本語, Català, English
Manantena ny handresy lahatra ny fitsaràna i Shahla Sherkat mba hamelàna ny famoahana indray ny fanontàna isam-bolana ny Zanan-e Emrooz. Sary avy amin'ny ICHRI, ary fampiasàna nahazoana alalàna.
Nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ity lahatsoratra ity ary naverina navoaka eto noho ny fiaraha-miasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho An'ny Zon'Olombelona ao Iran.
Nanapa-kevitra hampiato ny fanontàna ilay gazetiboky Zanan-e Emrooz (Ny Vehivavy Ankehitrio) mitàna ny laharana voalohany ao Iran ny Kaomity Mpanaramaso ny Asa Fanoavana Gazety ao Iran, ary nandefa ny raharahany ho fanenjehana any amin'ny rafi-pitsaràna Iraniana.
Tao anaty tafasiry iray niarahana tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho An'ny Zon'Olombelona ao Iran, ny tonian'ny famoahan-dahatsoratr'ilay gazetiboky, Shahla Sherkat, dia nilaza fa nanantena ny ho afaka handresy lahatra ny fitsaràna mba hamela ny famoahana indray ny fanontàna isam-bolana an'ilay gazetiboky.
Ny Mehr News Agency no nanambara ilay fanapahankevitry ny Kaomity Mpanaramaso ny Asa Fanaovana Gazety, tamin'ny filazàna hoe ny anton'ilay fandraràna dia noho ny fandrisihan'ilay gazetiboky sy fanamarinany ny “fanambadiana fotsy,” (sarintsarim-panambadiana), teny entin'ireo manampahefana hilazàna ny tokantrano maso ataon'ireo olona tsy vita raharaha.
“Tsy dia niasàko saina loatra ny zava-boalazan'ilay fanapahankevitra. Novakiako tany anaty vaovao ny momba ilay fanakànana,” hoy i Sherkat. “Raha raisina ny hoe tsy nosintonina ny fahazoan-dàlana, sy ny hoe naato fotsiny, mbola feno fanantenana aho fa ho afaka handresy lahatra ny fitsaràna amin'ny fanazavàko, ary ho afaka hiverina hanohy hiasa indray izahay,” hoy izy nanampy.
Nanomboka ny fanontàny ny Zanan-e Emrooz tamin'ny Jona 2014, ary naato teo ampiandrasana ny fivoahan'ny laharany faha-11. Nialoha ny nanombohan'ny Zanan-e Emrooz, nandany 16 taona i Sherkat nitazona ny toeran'ny tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Zenan nalaza tao Iran, izay noraràna nanombokany 17 Febroary 2008, noho ny namoahany votoaty nahatezitra ireo henjam-pihetsika maro, toy ireo fisoloany vava ny tolon'ny vehivavy mba hitovy zo eo anatrehan'ny fisarahana am-panambadiana, ny zo hitaiza ny ankizy, ny fandovàna, ankoatry ny olana hafa. Taorian'ny fandraràna ny Zanan, nozohian'i Sherkat nandritry ny fito taona teo ho eo ny fahazoandàlana iray ahafahany manonta iray hafa ho an'ny vehivavy, izay nahazoany iray ihany nony farany ho an'ny Zanan-e Emrooz.
Araka ny Mehr News, noraisin'ny Kaomity Mpanaramaso ny Asa Fanaovana Gazety ho “mifanohitra amin'ny fahadiovam-pitondrantena eny imasom-bahoaka, voafaritry ny artikla 6,andalana faha-6 amin'ny Lalànan'ny Asa Fanaovana Gazety” ny votoaty tao anatin'ny gazetiboky Zanan-e Emrooz. Nolazain'i Sherkat tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena Ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran fa tsy naharay velively filazàna mialoha avy amin'ireo manampahefan'ny governemanta izy momba ny votoaty tao anatin'ny famoahany.
“Tany anaty vaovao no namakiako hoe ny anton'ny fandraràna dia ny votoaty miresaka “fanambadiana fotsy”, navoaka tao anaty laharana iray. Tsy maintsy hiandry mandra-pivoaky ny datin'androm-pitsaràna aho. Nanantena hatrany aho, ary mijanona ho manantena hatramin'ny anio hoe ho voavaha ny zavatra rehetra, ka dia ho afaka hiverina hiasa indray izahay” hoy izy tamin'ilay Fanentanana. Ny laharana faha-5 tamin'ny fanontàna, navoaka efa ho volana enina lasa izay, no nitatitra fomba fijery isan-karazany momba ny fanaovana tokantrano maso.
Ny Masoivohom-Baovao Fars, henjam-pihetsika mpifikitra amin'ny nentin-drazana, dia nanoratra fa mbola lasa lavitra mihoatra noho ny resaka “fanambadiana fotsy” ny fandraràna ilay fanontàna. Notanisain'ny Fars ho anton'ny fandraràna ireo lahatsoratra momba ny zon'ny vehivavy sy ireo olan'ny fanatrehan'ny vehivavy lalao eny amin'ireo toerana fanaovana fanatanjahantena.